ဗိုလ်ဗကို - ဝီကီပီးဒီးယား
ဗိုလ်ဗကို (၁၉၁၉-၁၉၈၅) သည် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သော လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင် (ဒုတိယဆင့်)ရ တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး အကယ်ဒမီရ သရုပ်ဆောင်၊ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ၊ စာရေးဆရာ ဖြစ်သည့်အပြင်၊ တက္ကသိုလ်ဆရာ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
(၁၉၁၉-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၁"။-၁၁)ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၁၉၁၉
ဇွန် ၂၂၊ ၁၉၈၅(၁၉၈၅-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၆"။-၂၂) (အသက် ၆၅)
ဦးသန့် + ဒေါ်တင့်
စစ်မှုထမ်း၊ စာရေးဆရာ၊ သရုပ်ဆောင်၊ ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ၊ တက္ကသိုလ်ကထိက
လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင် (ဒုတိယဆင့်)
စာရေးဆရာ၊ သရုပ်ဆောင်၊ ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ ဗိုလ်ဗကိုအား ၁၉၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ အဘ ဦးသန်းနှင့် အမိ ဒေါ်တင့်တို့မှ (ဦးသန့်+ဒေါ်ဝင့်)မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ ဝက်စလီယံ ကျောင်းမှ ဆယ်တန်း အောင်မြင်သည်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ဝိဇ္ဇာ (ဂုဏ်ထူးတန်း) ကို ပထမ အဆင့်ဖြင့် အောင်မြင်သည်။
ထို့နောက် ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်မှူး ရာထူးဖြင့် တပ်မတော်မှ အငြိမ်းစား ယူခဲ့သည်။ တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနှင့် ဝါဒဖြန့်ချိရေးတာဝန်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၅၀ ပြည်နှစ်တွင် နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်အပ်နှင်းသည့် ဇေယျကျော်ထင်ဘွဲ့နှင့် ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့တို့ကို ရရှိခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဥပဒေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ယေးလ်တက္ကသိုလ်(Yale) မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ စာပေဗိမာန် စာတည်းနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၌ ကျင်းပသော ရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့် အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သော ယူနက်စကို သက်ကြီး စာပေ တတ်မြောက်ရေး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်အပ်နှင်းသည့် လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင် (ဒုတိယဆင့်) ကို ရရှိခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်ကောင်စီ စည်းရုံးရေးကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုလည်း နှစ်ရှည်လများ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
လူထု အောင်သံ ၁၉၅၈
သီတာပြုံး ၁၉၇၀ - အကယ်ဒမီ
တကွေ့ တကမ္ဘာ ၁၉၇၁ - အကယ်ဒမီ
သူရဲကောင်းလေးများ (ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား) ၁၉၈၁
ဟဲမင်းဝေး-အီး လက်ရွေးစင် စာပဒေသာ ၁၉၆၀
ယေးလ်တက္ကသိုလ် ခရီးသည် ၁၉၆၀
ဘယ်လိုလူလဲ (ဗိုလ်ခင်မောင်လေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ) ၁၉၆၀
မာနနှင့် လူသား (ဟယ်လင်ဂျူနီယာဒီအက်စ်) ၁၉၆၃
ပညာသိပ္ပံစက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှု ၁၉၆၄
ကဗျာသစ်ဆရာ ကားလ်ဆင်းဗတ် ၁၉၆၅
စက်မှုလက်မှု တိုးတက်ရေး ၁၉၆၅
ရုပ်ရှင်မြို့တော် (ဟောလီးဝုဒ်၏ ငွေရောင်ပိတ်ကား) ၁၉၆၅
သမ္မတတဦး၏ အမွေအနှစ် ၁၉၆၅
ကုလသမဂ္ဂ၏ ကမ္ဘာ့ဉာဏ်ဗိမာန် ၁၉၆၆
ပြည်သူ့စာရေး ဆရာမကြီး မပုလဲ ၁၉၆၆
မျိုးရိုးဇာတိနှင့် လူ့သဘာဝ ၁၉၆၆
ကင်ဆာရောဂါ အောင်နိုင်ရေး ၁၉၆၇
မြေပြောသော ပုံပြင် ၁၉၆၇
ပီမိုးနင်း ဘဝနှင့်စာပေ ၁၉၇၃
↑ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန စာတည်းအဖွဲ့, ed. (စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈)။ နှစ်ဆယ်ရာစု မြန်မာ စာရေးဆရာများနှင့် စာစုစာရင်း။ ပဉ္စမတွဲ (ပထမအကြိမ် ed.)။ ရွှေဟင်္သာ စာအုပ်တိုက်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗိုလ်ဗကို&oldid=713912" မှ ရယူရန်